အက္ခရ: May 2008
အသောကရဲ့ အက္ခရာများ-၁၅ (အပိုင်း-၂)
နာဂလဇနသ အကသ္မာ ပလိဗောဓေ ၀။ အကသ္မာ ပလိကိလေသေ ၀ နော သိယာ
လူအပေါင်းကို အကြောင်းမရှိဘဲ ဖမ်းဆီးခြင်း ညှင်းပန်းခြင်း မပြုရ။
ဒေ၀ါနံပိယမင်း၏ စကားဖြင့် တောသလိမြို့ကို အုပ်ချုပ်သော မဟာမတ္တခေါ် အမတ်ကြီးတို့ကို ဤသို့ ပြောကြားရမည်။
ငါတွေ့မြင်သော အကြောင်းအရာကို သင်တို့အား သိစေလို၏။ အသို့နည်း။ ငါသည် ပြုသင့်သော အမှုကို နည်းလမ်းအမျိုးမျိုးဖြင့် စတင် အားထုတ်မည်။ အကျိုးကျေးဇူးရှိသော နည်းလမ်းကို သင်တို့အား ညွှန်ကြားမည်။ ယင်းသည် အမှန်မုချ ငါအလိုရှိသော နည်းလမ်းဖြစ်၏။ သင်တို့သည် ထောင်ပေါင်းများစွာသော လူတို့၏ မှီခိုရာ ဖြစ်သောကြောင့် သူတော်ကောင်းတို့ မြတ်နိုးခြင်း၏ တည်ရာဖြစ်ရမည်။
လူအပေါင်းသည် ငါ၏ သားသမီးများ ဖြစ်၏။ အသို့နည်း- ငါ၏ သားသမီးများကို ပစ္စုပ္ပန် တမလွန်နှင့် စပ်လျဉ်းသော စီးပွားချမ်းသာကို ယှဉ်စေလိုသကဲ့သို့ လူတို့၌လည်း ငါအလိုရှိ၏။ ဤစကား၏ အဓိပ္ပါယ်အလုံးစုံကို အကုန်သိကြမည်မဟုတ်။ တစုံတဦးသိသော်လည်း တစိတ်တဒေသမျှသာ သိမည်။ အားလုံး သိမည် မဟုတ်။
သင်တို့သည် ဤနည်းလမ်းကို ရှုကြလော့၊ ယခု ပြောကြားမည့် စကားသည် ကောင်းစွာ စီရင်ထားသော နီတိဖြစ်၏။ တစုံတယောက်သည် အကြောင်းမဲ့ အချုပ်အနှောင်, ညှင်းပန်းနှိပ်စက်ခြင်း ခံရပါလျှင် သူနှင့် အခြားသူ အများအပြားလည်း အလွန် ဆင်းရဲပင်ပန်းခြင်းသို့ ရောက်ကြရ၏။ ထိုသို့သောအခါ မဇ္ဈိမပဋိပဒါကို အလိုရှိအပ်၏။ အသို့နည်း- ငြူစူခြင်း,အားမထုတ်ခြင်း, ကြမ်းကြုတ်ခြင်း, အဆောတလျင် ပြုလုပ်ခြင်း, မစွမ်းနိုင်ခြင်း, ပျင်းရိခြင်း, အအိပ်ကြူးခြင်းတို့ကြောင့် ပြီးမြောက်ခြင်း မဖြစ်နိုင်။ ထို့ကြောင့် ယင်းတရားတို့ မဖြစ်စေရာ အစဉ် အားထုတ်ခြင်းနှင့် အဆောတလျင် မပြုလုပ်ခြင်းသည် တရားအားလုံး၏ မူလဖြစ်၍ ယင်းတို့ကို ပြုလုပ်အားထုတ်ရမည်။ မပြတ်မလပ် ကျင့်သွားကြရမည်။
ထိုတရားဖြင့် သူတပါးတို့အားလည်း “ဒေ၀ါနံပိယမင်းသည် ဤသို့ ဆုံးမ၏။ ထို့ကြောင့် ယင်းတရားကို ကောင်းစွာ အားထုတ်ပါလျှင် အကျိုးဖြစ်မည်။ ပြည့်စုံစွာ မကျင့်ပါလျှင် အပြစ်ဖြစ်မည်။ ဖောက်ပြန်၍ ကျင့်ပါသော် နတ်ရွာသို့လားရမည်။ ကြွေးမြီမှလည်း ကင်းမည်”ဟု ပြောဟောကြလော့။
ဤစာကို ဤအကျိုးအတွက် ရေးစေခြင်း ဖြစ်၏။ ယင်းစာဖြင့် မြို့အုပ်ချုပ်သူတို့သည် အခါခပ်သိမ်း ဤသို့ ယှဉ်ရာ၏။ အကြောင်းမရှိဘဲ မြို့နေလူတို့ကို ချုပ်နှောင်ခြင်း, ညှင်းပန်းနှိပ်စက်ခြင်းတို့ မပြုရ။
ဤအတွက် ငါသည် ငါးနှစ် ငါးနှစ်မြောက်တိုင်း သိမ်မွေ့သော, အပြစ်ကင်းသော, သနားကရုဏာရှိသော အမတ်တို့ကို စေလွှတ်မည်။ သူတို့သည် ဤအကျိုးအားနိသင်ကို သိမြင်၍ ငါ၏ အဆုံးအမအတိုင်း ဆောင်ရွက်ကြလိမ့်မည်။ ထို့ပြင် ဥဇ္ဇေနီပြည်၌ မင်းသားလည်း ဤအကျိုးအတွက် ဤနည်းလမ်းအတိုင်း အမှုထမ်းတို့ကို စေလွှတ်လိမ့်မည်။ တက္ကသိုလ်ပြည်၌လည်း ဤအတူပင်တည်း။ အမတ်ကြီးတို့သည် မိမိတို့ ဆောင်ရွက်ရမည့် အလုပ်ကိစ္စကို သိကြပြီးဖြစ်၍ မင်းညွှန်ကြားသည့်အတိုင်း ကြိုးစားအားထုတ် ပြုလုပ်ကြလိမ့်မည်။
(သိရီဓမ္မာသောကမင်းတရားကြီး၏ ကိုးတိုင်းကိုးဌာန ဗုဒ္ဓဓမ္မနိုင်ငံတော်-ဦးသော်ဇင်)
By order of the Beloved of the Gods: the officers and city magistrates at Tosali/Samapa are to be instructed thus:
Whatever I approve of, that I desire either to achieve by taking action or to obtain by effective means. This is what I consider the chief method in this matter, and these are my instructions to you. You are in charge of many thousands of living beings. You should gain the affection of men. All men are my children, and just as I desire for my children that they should obtain welfare and happiness both in this world and the next, the same do I desire for all men. But you do not realize how far this principle goes—possibly one man among you may realize it, but even he only in part and not entirely. Reflect on it well even those of you who are well-placed. Oftenaman suffers imprisonment or torture and then is released from prison, without reason, and many other people suffer further. You should strive to practice impartiality. But it cannot be practiced by one possessing any of these faults—jealousy, shortness of temper, harshness, rashness, obstinacy, idleness, or slackness. You should wish to avoid such faults. The root of all this is to be even-tempered and not rush in your work. He who is slack will not act, and in your official functions you must strive, act, and work. So he who approves this should say to you, ‘Think of clearing to debt—thus and thus, does the Beloved of the Gods instruct.’ There is great advantage in conforming to this instruction and great loss in not conforming to it. For by disregarding it you will gain neither heaven nor the favor of the king. Why do I devote my mind to this matter so extensively? Because by conforming you will reach heaven and will discharge your debt to me.
This edict is to be proclaimed on the eighth day of star Tisya, and at intervals between the Tisya-day it is to be read aloud, even toasingle person. By doing this you may be able to conform to my instructions. This inscription has been engraved here in order that the city magistrates should at all time see to it that men are never imprisoned or tortured without good reason. And for this purpose, I shall send out on tour every five years, an officer who is not severe or harsh; who, having investigated this matter…, shall see that they carry out my instructions. The prince at Ujjain shall send outasimilar group of officers, but at intervals not exceeding three years. Similarly at Taxila when the officers go out on tour they shall investigate this, without neglecting their normal duties and shall carry out the king’s instructions.
(Asoka and the decline of the Mauryas- Romila Thapar)
The mahamatra od Tosali who are in-charge of judiciary, should be addressed thus by the command of the Beloved of the Gods: Whatever I conceive, I desire to see that into practice and fulfilled by proper means. For this I consider my instructions to you to be the principal means to that end. You are appointed over thousands of lives in order that you may surely gain the affection of the people. All men are my children. I desire for my children that they be united with all well-being and happiness of this world and the other world, similarly I wish it for all people. But you do not know the extent of this matter. Some individual officer knows it, but he, too, knows onlyapart of it, not the whole. See to this then, and this in policy is well established. Again there may be some individual who undergoes imprisonment or torture which causelessly turns to be the reason of his death, and many other persons also suffer from it. For that purpose you should desire to follow the middle path. But one cannot gain success through the following vices, envy, nervousness, cruelty, impatience, want of application, laziness and weariness. So you should wish that these vices (mentioned above) not be yours. The fundamentals of success are, however, steadiness and patience. He who is tired and wearied will not rise, but one should move, proceed and go ahead. This is the maxim of conduct. This is the policy which you should follow. For this reason you are to be told (thus): “See to the fulfillment of your duty (to the king).” Such and such is the instruction of the Beloved of the Gods: “SO the fulfillment of the same produces great good and non-fulfillment great calamity. And if one fails to fulfill it, one will attain neither heaven nor favor of the emperor. Why?—for enthusiasm of mind for this purpose has twofold results. If it is properly done you will gain heaven and also discharge your obligation to me.”
And this edict is to be heard on (every day of) the Tisya, and in the gap of the Tisya, on occasion it may be heard by evenasingle (person). Acting this thus you will be able to achieve (this object). For this purpose has this edict been engraved here so that the judicial officers may strive all the time that there may be no imprisonment of the people or their torture without reason.
And for this purpose I shall order mahanatras to go out on tour every five years, who will neither be rude nor violent but considerate in action, so that being alert in it, the judicial officers will act in accordance with my instructions. From Ujjayini, too, the prince (viceroy) will similarly send these officers and will not allowagap on tour without overlooking their own duty, they will think this also, namely, whether the judicial officers are acting in accordance with the instruction of the king.
(Inscriptions of Asoka- N. P. Rastogi)
Posted by နတ္ထိ at 1:37 PM0comments
Labels: ကူးယူဖော်ပြချက်, သမိုင်း, အသောကကျောက်စာ
မုနိသော ပဇာ မမာ။
လူအပေါင်းသည် ငါ၏ သားသမီးများဖြစ်၏။
ဒေ၀ါနံပိယသ ၀စနေန တောသလိယံ မဟာမာတ နဂလပိယောဟာလကာ။
၀တ၀ိယ။ အံ ကိဆိ ဒခါမိ ဟကံ တံ ဣဆာမိ။
ကိံတိ။ ကံမန ပဋိဝေဒယေဟံ။
ဒုဝလတေ စ အာလဘေဟံ ဧသ ဟ မေ မောချမတ ဒုဝါလ ဧတသိ အဌသိ အံ တုဖေသု။
အနုသထိ။ တုဖေ ဟိ ဗဟူသု ပါနသဟသေသု အာယတာ။ ပနယံ ဂဆေမ သုမုနိသာနံ။ သဝေ
မုနိသော ပဇာ မမာ။ အထာ ပဇာယေ ဣဆာမိ ဟကံ။ ကိံတိ။ သဝေန ဟိတသုခေန ဟိဒလောကိက-
ပါလလောကိကာယေ ယူဇေ၀ူ တိ။ တထာ (သဝေသု) မုနိသေသု ပိ ဣဆာမိ ဟကံ နော စ ပါပုနာထ အာဝါ ဂ-
မကေ ဣယံ အဌေ။ ကေဆ ၀ ဧကပုလိသေ ပါပုနာတိ ဧတံ၊ သေ ပိ ဒေသံ နော သ၀ံ။ ဒေခတ ဟိ တုဖေ ဧတံ။
သုဝိဟိတာ ပိ နိတိ။ ဣယံ ဧက ပုလိသေ ပိ အထိ ယေ ဗံဓနံ ၀ါ ပလိကိလေသံ ၀ါ ပါပုနာတိ။ တတ ဟောတိ
အကသ္မာ တေန ဗံဓနံတိက အံနေ စ ဗဟုဇနေ ဒ၀ိယေ ဒုခီယတိ။ တတ ဣဆိတ၀ိယေ
ဟုဖေ ဟိ။ ကိံတိ။ မဈံ ပဋိပါမေဒယေမာတိ။ ဣမေဟိ စု ဇာတေဟိ နော သံပဋိပဇတိ ဣသာယ အာသုလောပေန
နိထူလယေန တုလာနာယ အနာဝူတိယ အာလသိယေန ကိလမထေန။ သေ ဣဆိတ၀ိယေ။ ကိံတိ၊ ဧတေ
ဇာတာ နော ဟုေ၀၀ု မမာတိ။ ဧတသ စ သ၀သ မူလေ အနာသုလောပေ အတူလနာ စ နိတိယံ ဧ ကိလံတေ သိယာ
န တေ ဥပဂဆေ။ သံစလိတ၀ိယေ တု ၀ဋိတ၀ိယေ ဧတ၀ိယေ ၀ါ။ ဟေ၀ံမေ၀ ဧ ဒခိယေ တုဖာက တေန ၀တ၀ိယေ။
အံန နေ ဒေခတ။ ဟေ၀ံ စ ဟေ၀ံ စ ဒေ၀ါနံပိယသ အနုသထိ။ သေ မဟာဖလေ ဧတသ သံပဋိပါဒ
မဟာ အပါယေ အသံပဋိပတိ။ ပိပဋိပါဒယမီနေ ဟိ ဧတံ နထိ သွဂသ အလဓိ နော လာဇာလဓိ။
ဒုအာဟလေ ဟိ ဣမသ ကံမသ မေ ကုတေ မနေ အတိလေကေ။ သံပဋိပဇမီနေ စု ဧတံ သွဂံ။
အာလာဓယိသထ မမ စ အာနနိယံ ဧဟထ ဣယံ စ လိပီ တိသနခတေန သောတ၀ိယ။
အံတလာ ပိ စ တိသေ ခနသိ ခနသိ ဧကေန ပိ သောတ၀ိယ ဟေ၀ံ စ ကလံတံ တုဖေ။
စဃထ သံပဋိပါဒယိတဝေ။ ဧတာယေ အဌာယေ ဣယံ လိပိ လိခိတာ ဟိဒ ဧန။
နဂလ၀ိယောဟာလကာ သသွတံ သမယံ ယုဇေ၀ူ တိ နာဂလဇနသ အကသ္မာ ပလိဗောဓေ ၀။
အကသ္မာ ပလိကိလေသေ ၀ နော သိယာ တိ။ ဧတာယေ အဌယေ ဟကံ ဓမတေ ပံစသု ပံစသု ၀သေ--
သု နိခါမယိသာမိ ဧ အခခသေ အစံဍေ သခိနာလံဘေ ဟောသတိ။ ဧတံ အဌံ ဇာနိတု တထာ
ကလံတိ အထ မမ အနသထီတိ။ ဥဇေနိတေ ပိ စု ကုမာလေ ဧတာယေ ၀ အဌာယေ နိခါမယိသ…။
ဟေဒိသံ မေ၀ ၀ဂံ နော စ အတိကာမယိသတိ တိံနိ ၀သာနိ။ ဟေ၀မေ၀ တခသိလာတေ ပိ၊ အဒါ အ…
တေ မဟာမာတာ နိခမိသံတိ အနုသယာနံ တဒါ အဟာပယိတု အတနေ ကမံ ဧတံ ပိ ဇာနိသံတိ
တံ ပိ တထာ ကလံတိ အထ လာဇိနေ အနုသထီ တိ။
ဒေ၀ါနံပိယမင်းကြီး၏ စကားတော်ဖြင့် တောသာလိပြည်အမတ်ကြီး၊ ၀ါ၊ ၀န်ကြီးတို့နှင့် မြို့ဝန်တို့အား မိန့်ကြားအပ်သည်မှာ--
တစုံတရာအား ငါမြင်၍ အလိုရှိလျှင် ဆောင်ရွက်ဖွယ် လုပ်ငန်းကို ငါစီစဉ်၍ နည်းလမ်းကို ငါ ရှာကြံပြီးသော် အရေးအကြီးဆုံးဟု ငါထင်သော နည်းလမ်းကို သင်တို့အား ညွှန်ကြားချက် ဖြစ်စေ၏။
သင်တို့သည် ထောင်ပေါင်းများစွာသော သတ္တ၀ါတို့၏ မှီခိုရာ ဖြစ်၏။ ငါတို့သည် သူတော်ကောင်းတို့၏ ကြည်ညိုခြင်းကို ခံယူကြကုန်အံ့။
ခပ်သိမ်းသော သူတို့သည် ငါ၏ သားသမီးများ ဖြစ်ကြကုန်၏။ ငါ၏ သားသမီးများအား ဤလောကနှင့် တမလွန်လောကတို့၏ စီပွားချမ်းသာအပေါင်းနှင့် ငါယှဉ်စေလိုသည်နည်းတူ၊ ခပ်သိမ်းသော သူတို့အားလည်း ငါယှဉ်စေလို၏။ ဤငါ၏ ရည်ရွယ်ချက် ရှိသ၍ သင်တို့ သိကြမည် မဟုတ်။ အကယ်၍ တယောက်တလေ သိသော်လည်း တစိတ်တဒေသကိုသာ သိပေမည်။ အလုံးစုံ သိမည် မဟုတ်ပေ။
ဤအချက်ကို သင်တို့ သတိမူကြကုန်။ ဥပဒေစည်းကမ်းများကို ကောင်းစွာ ပြဌာန်းထားငြားလည်း တစုံတယောက်သောသူသည် အကျဉ်းချထားခြင်းကို၎င်း နှိပ်စက် ညှင်းပန်းခြင်းကို၎င်း အကြောင်းမဲ့ခံရသော် ထိုအကျဉ်းခံရသူနှင့် နီးစပ်သူ (ဆွေမျိုးသားချင်း) တို့သည်၎င်း အခြား များစွာသော သူတို့သည်၎င်း အတိုင်းထက် အလွန် ဆင်းရဲ ဒုက္ခရောက်ကြရကုန်၏။
ထိုကြောင့် သင်တို့သည် မယုတ်မလွန် အလယ်အလတ်လမ်းကို လိုက်ရန် အားထုတ်ကြရာ၏။ သို့ရာတွင် ငြူစူခြင်း ပေါ့လျော့ခြင်း ကြမ်းကြုတ်ခက်ထန်ခြင်း အဆောတလင်ပြုခြင်း မကျွမ်းကျင်ခြင်း ပျင်းရိခြင်း မောပမ်းလွယ်ခြင်းတို့သည် (ကိုစိတ်နှစ်ပါး၌) ဖြစ်ပေါ်နေခဲ့သော် ဤအလယ်အလတ်လမ်းသို့ မရောက်နိုင်ရာ။ ထိုကြောင့် မိမိ၏ သဏ္ဍာန်၌ ထိုအခြင်းအရာတို့ မဖြစ်ပေါ် မကိန်းအောင်းရန် အားထုတ်ရာ၏။
ဤခပ်သိမ်းသော အခြင်းအရာတို့၏ (မဖြစ်ပေါ်ရာသော) အကြောင်းရင်းသည်ကား မပေါ့လျော့ခြင်းနှင့် အဆောတလင်မပြုခြင်း ဖြစ်၏။ (အားထုတ်ဆောင်ရွက်ရာ၌) အမြဲ မောပန်းလွယ်သော သူသည် ထိုအလယ်အလတ်လမ်းသို့ မရောက်နိုင်ရာ။
ထို့ကြောင့် သင်တို့သည် ထကြွလုံ့လပြုကြလော့။ မနားမနေ ဆောင်ရွက်ကြလော့။ သင်တို့သည် ဤအကြောင်းကို သိမြင်လျက် ဤသို့ ပြောကြားရာ၏။
ဤအမိန့်တော်ကို သင်တို့ ရှုကြကုန်။ နတ်တို့ ချစ်မြတ်နိုးသော မင်းကြီးသည် ဤသို့ ဤသို့လျှင် ညွှန်ကြားဆုန်းမပိ၏။ ထိုအဆုန်းအမတို့အား ကောင်းစွာ လိုက်နာသော် ကြီးစွာသော အကျိုးရကို ရ၍ မလိုက်နာသော် ကြီးစွာသော ပျက်စီးခြင်းတို့ ရောက်ရာ၏။ ဤအဆုန်းအမမှ ဖောက်ပြန်၍ ကျင့်သော သူတို့သည် နတ်တို့အားလည်း မနှစ်မြို့စေ။ မင်းကြီးအားလည်း မနှစ်မြို့စေ။
ငါ၏ အမှုတော်ကို အလွန်လေးစားသော စိတ်ဖြင့် ဆောင်ရွက်သူတို့သည်ကား အကျိုးနှစ်ပါးကို ပြီးစေအံ့။ ထိုသူတို့သည် ငါ၏ အဆုန်းအမကို လိုက်နာသဖြင့် နတ်ပြည်ချမ်းသာကို ရ၍ ငါမင်းကြီးအား တင်ရှိသော ၀တ္တရားကြွေးမှ ကင်းလွတ်ခြင်းသို့လည်း ရောက်ကြကုန်အံ့။
ဤကဗျည်းကို တိသ (ဖုသျှ) နက္ခတ်နှင့် ယှဉ်သော နေတို့၏ အကြား၌လည်း မကြာမကြာ တယောက်တည်းပင် ဖြစ်စေကာ ကြားနာရာ၏။ ဤသို့ ဆောင်ရွက်ခြင်းဖြင့် သင်တို့သည် မိမိတို့၏ ၀တ္တရားများကို ကျေပွန်ရန် အားထုတ်ကြကုန်လော့။
မြို့ဝန်တို့သည် မြို့သူမြို့သားတို့အား အကြောင်းမဲ့ ချုတ်ချယ်ခြင်း ညှင်းဆဲခြင်း မရှိရန် အခါခပ်သိမ်း အားထုတ်စေခြင်းအလို့ငှာ ဤကဗျည်းကို ရေးစေ၏။
ဤအလို့ငှာ ငါသည် ငါးနှစ် ငါးနှစ်မြောက်တိုင်း အမတ်ကြီးတို့ကို စေလွှတ်အံ့။ ထိုသူတို့သည် မကြမ်းထမ်း မရက်စက် သိမ်မွေ့သည် ဖြစ်လိမ့်အံ့၊ ဤအချက်ကို သတိမူလျက် ထိုအမတ်ကြီးများသည် ငါညွှန်ကြားသည့်အတိုင်း ဆောင်ရွက်ကြကုန်အံ့။
ဤအလို့ငှာပင် ဥဇ္ဇေနီပြည်ရှိ ငါ၏ သားတော်မင်းသားသည်လည်း သုံးနှစ် မလွန်မှီ တကြိမ်ကျ အလားတူ အမှုထမ်းတို့အား စေလွှတ်ရာ၏။ တက္ကသိုလ်ပြည်မှလည်း ထိုနည်းတူ စေလွှတ်စေသတည်း။
အမတ်ကြီးတို့သည် ခရီးထွက်ခွာ သွားလာကြသောအခါ မိမိတို့၏ အမှုကိစ္စများကို မလစ်ဟင်းစေပဲ ဤကိစ္စကိုလည်း သတိမူလျက် မင်းကြီးညွှန်ကြားတော်မူသည်အတိုင်း ဆောင်ရွက်ကြစေကုန်သတည်း။
Thus saith His Sacred Majesty: At Samapa the High Officers are to be addressed in the King's words, as follows: ' Whatsoever my views are I desire them to be acted on in practice and carried into effect by certain means. And in my opinion the chief means for attaining this purpose are my instructions to you.
"All men are my children;" and, just as I desire for my children that they may enjoy every kind of prosperity and happiness both in this world and, in the next, so also I desire the same for all men. [If you ask] "With regard to the unsubdued borderers what is the king's command to us?” [The answer is that] “The King desires that ' they should not be afraid of me, that they should trust me, and should receive from me happiness, not sorrow.' Moreover, they should grasp the truth that ' the King will bear patiently with us,' and that 'for my sake they should follow the Law of Piety and so gain both this world and the next.' “And for this purpose I give you instructions. Thereby being freed from my debt, giving instructions to you and making known my will, my inflexible resolve and promise.
Now you, acting accordingly, must do your work, and must make these people trust me and grasp the truth that "the King is to us even asafather; he loves us even as he loves himself ; we are to the King even as his children."
By instructing you and intimating my will, my inflexible resolve and promise, I shall be provided with [trained] local officials for this business, because you are inaposition to make these people trust me and to ensure their prosperity both in this world and in the next, and by so doing you may win heaven and also effect my release from debt [or " discharge your debt to me "].
And for this purpose has this scripture of the law of piety been written here, in order that the High Officers may strive without ceasing both to secure the confidence of these borderers and to set them moving on the path of piety.
And this scripture must be recited at the beginning of each season of four months on the Tishya day. In the intervals also it may be recited. On occasion it may be recited even to one person. By acting this you should endeavor to fulfil my instructions.'
The High Officers of Tosali in charge of the administration of the city, are to be addressed as follows at the command of His Sacred Majesty: Whatsoever I view (as right) I want to see how it can be carried out in practice and fulfilled by proper means.
And this is regarded by me as the principal means to this end, viz., (to give) instructions to you.
For you are placed over thousands of souls l with the object of getting to the people's affection.
All men are as my children. As, on behalf of my own children, I desire that they may be provided with complete welfare and happiness both in this world and the next, the same I desire also for (all) men. Now you do not understand how far this matter goes. Some individual person understands this, but he, too, onlyapart, not the whole. See to it then, although you are well provided for. In administration, it happens that some individual undergoes imprisonment or torture, which accidentally becomes the cause of his death, and many other persons are deeply aggrieved over it. There must you demand that the Middle Path (i.e., moderation or justice) be observed. But one cannot achieve success through the following traits: envy, volatility, cruelty, impatience, want of application, laziness, and lethargy. "That these traits be not mine" is to be wished for. The root of the whole matter is, indeed, Steadiness and Patience. He who is tired in administration will not rise up; but one should move, advance and march on.
He who will look after this must tell you: "See to the discharge of your obligations (to the king). Such and such is the instruction of His Sacred Majesty."
Observance of same produces great good, non-observance great calamity. For if one fails to observe this, there will not be attainment of either heaven or royal favor. The reason why (there is) my excessive thought (is) that of this duty (there is)atwofold gain, for by properly fulfilling it you will win both heaven and release from your obligations to me.
And this edict is to be listened to on (every day of) the Tisya, 1 and in the intervals between the Tisya days, on auspicious occasions, it may be listened to even by individuals.
Thus doing you will be able to accomplish (this object). For this purpose has this edict been inscribed here that the city Magistrates4may strive all the time that there might not be the imprisonment of the citizens or their torture without cause.
And for this purpose shall I depute every five years [a Mahamatra (Jaugada text)] who would be neither harsh nor violent but considerate in action, (in order to ascertain whether (the Judicial Officers) understanding this purpose are acting thus, as (is) my injunction.
But from Ujjayim, too, the prince (governor) will, for the self -same purpose, deputeasimilar body of officers and will not allow (more than) three years to elapse. So also from Takhasila. When . . . these High Officers would thus set out on tour, then they would, without neglecting their own duties, will ascertain this as well, viz., whether (the Judicial Officers) are carrying out this also thus, as is the king's injunction.
Posted by နတ္ထိ at 1:32 PM0comments
“ အက္ခရ ” ဆိုတာ “ န+ခရ ” ပါ။ အပျက်အစီး+မရှိ လို့ ဆိုလိုတယ်။ “ပျက်စီးမှုတွေ မရှိတဲ့နေရာ”လို့လဲ ဆိုနိုင်တယ်။ အက္ခရာစာလုံးတွေကို မရည်ညွှန်းပေမယ့် အက္ခရာတွေနဲ့ ရေးပြရတာပါပဲ။
န + အတ္ထိ = နတ္ထိ